Inona no saka-saka? Lazainay aminao ny tombony azo avy aminy, ny fomba fandraisana azy io ary bebe kokoa | Sakafo Nutri
Inona no saka-saka?
Ancaro | | soso-kevitra, aretina, fahasalamana
La ny lanjan'ny saka, fantatra ihany koa amin'ny anarana uncaria tomentosa, dia singa ahitra avy any Peroa izay vita amin'ny hodi-kazo sy ny faka amin'ny voaloboka. Nampiasaina hatramin'ny andro taloha izy io noho ny tombontsoa lehibe vokariny amin'ny vatan'ny olona.
Azonao atao ny mahazo sy mampiditra ny saka-saka amin'ny sakafonao amin'ny endrika dite, kapsily na estrakta. Ankehitriny, tsy maintsy mihinana an'ity singa ity amin'ny vola marina ianao ary tsy afaka ampiasain'ny vehivavy bevohoka na olona mijaly amin'ny sclerose na aretina mikraoba.
1 Inona ny saka-saka
2 Tombony azo amin'ny saka-saka
3 Mahasoa ve ny mampihena ny lanja?
4 Fananan'ny saka-saka
5 Aiza no azonao vidiana
7 Ahoana ny fakana ny saka-saka
Inona ny saka-saka
Rehefa miresaka momba ny saka-saka isika dia ataontsika amin'ny a zavamaniry mananika izay teratany peroa. Araka ny lazaintsika dia zavamaniry mananika izy io izay manana vatan-kazo manify tena mahatratra 15 metatra ny haavony. Ny raviny boribory lavalava sy karazana hazondamosina miolikolika dia anisan'ny mampiavaka ny saka-saka. Na dia tsy manana fototra ara-tsiansa aza izy io dia tsy maintsy lazaina fa izy io dia iray amin'ireo zavamaniry efa nampiasaina nandritra ny taona maro, noho ny fananany ary mamela antsika tombony tsara.
Tombony azo amin'ny saka-saka
Anisan'ireo tombony rehetra azon'ny saka-saka, ny tena lehibe dia ny manatsara ny olana amin'ny fandevonan-kanina.
Matetika izy io dia miady amin'ny karazana aretina, virus, na bakteria.
Manampy amin'ny fandrindrana ny tsingerin'ny hormonina.
Voalaza koa fa lafatra ao tranga gout na asidra urika.
Tsy adino fa mahasoa ihany koa ho an'ny diabeta.
Nosoratana ho an'ny tranganà vanin-taolana na osteoarthritis.
Miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana dia tsy maintsy arovantsika ny fitadidiantsika ary na dia misy fitsaboana isan-karazany aza amin'izany dia afaka mampiasa vahaolana voajanahary bebe kokoa hatrany isika toy ny saka-saka.
Miadia herpes, samy ilay antsoina hoe Zona toy ny herpes fivaviana.
Hanafoana ny fanaintainan'ny hozatra izany.
Manadio ny voa
Mahasoa amin'ny sery
Esory ny poizina.
Misoroka ny aretin-kozatra ary manakana ny fananganana trombi
Mampihena ny voka-dratsy vokarin'ny fitsaboana toy ny fitsaboana simika.
Izy io dia hanome anao effet detoxifying.
Hanampy anao hampihena ny tazo izany.
Hanampy anao hiady amin'ny radika maimaim-poana izany.
Hanampy anao hanadio ny vavoninao izy io.
Hanampy anao amin'ny fanamafisana ny hery fiarovanao.
Hanampy anao hiady amin'ny homamiadana izy io.
Mahasoa ve ny mampihena ny lanja?
Manana tombony maro ny homboan'ny saka ary anisany rehetra, fanesorana poizina koa dia iray amin'ireo manasongadina. Ka raha mandray an'io fanafody io ho fampidiran-dresaka isika, dia afaka manampy antsika hahatsapa ho maivana kokoa izany, hampihena ny kibo. Tsy midika akory izany fa ny fihinanana azy fotsiny dia hahatonga antsika ho very kilao, fa azontsika atao ny manambatra azy io amin'ny sakafo mety sy fanaovana fanatanjahan-tena kely hahitana ny valiny.
Anisan'ny toetra fototry ny saka ny saka hetsika antioksida sy anti-inflammatoire, fa koa analgesika na diuretic. Koa satria misy alkaloid, polyphenols na fitehirizam-bokatra phtosterol. Ka noho izy rehetra dia matetika ampiasaina amin'ny aretina mitaiza sy miady amin'ny inflammatoire. Ho fanampin'izay, voalaza fa ny olona rehetra manaraka fitsaboana simika dia afaka mihinana ity zavamaniry ity mba hampihena ny vokatry ny fitsaboana voalaza.
Aiza no azonao vidiana
Azontsika atao ny mahita ny saka-saka amin'ny mpitsabo raokandro toy ny parapharmacies. Ho fanampin'izany, hananantsika azy io amin'ny kapsily sy amin'ny infusions ary koa amin'ny latsaka, mba hahafahan'ny tsirairay misafidy ny fomba tsara indrindra haka azy. Endrika samy hafa fa ny tombony sy ny tombony mitovy aminy.
Ny fanafody rehetra, na voajanahary na tsia, dia tokony horaisina amin'ny antonony. Raha tsy izany dia mety hiteraka izy ireo fiatraikany ratsy. Amin'ity tranga ity, rehefa miresaka momba ny saka-saka isika dia mety hamela antsika fivalanana na vavony mikorontana. Fa raha mbola manana karazana aretina na olana ara-pahasalamana isika, na, noho izany dia tsy tsara ny maka lava ny saka-saka.
Tsy soso-kevitra ihany koa amin'ny olona mararin'ny fery na amin'ny zaza tsy ampy taona izany, raha tsy efa nifampiresaka tamin'ny dokoteranao teo aloha isika. Raha mieritreritra ianao fa bevohoka na mampinono dia tokony apetrakao ankilabao ny saka-saka. ihany koa dia contraindicated ho an'ny olona ambany tosidra na olona hemophilia.
Anisan'ny voka-dratsiny azontsika lazaina, ho fanampin'ireo voalaza etsy ambony, dermatitis, hives na allergy. Fa tsikaritsika ihany koa ny fanina, ny fivalanana siligaoma ary ny fiakaran'ny rà mandriaka. Ka alohan'ny handraisana zavamaniry toy izao dia ilaina ny manatona dokotera. Raha manomboka mandray azy isika ary mahatsapa ny sasany amin'ireo olana etsy ambony, dia mila mijanona tsy handray azy fotsiny isika ary ho hitantsika haingana ny fanatsarana.
Ahoana ny fakana ny saka-saka
Ny ampahany amin'ny faka sy ny hodi-kazo dia roa amin'ireo ampahany be mpampiasa indrindra rehefa miresaka momba ny fihinanana ny saka-saka. Ny mahazatra sy mahazo aina indrindra dia raiso ho fampidirana. Fa marina fa azonao atao ihany koa ny mandray azy ireo amin'ny kapsily. Tadidio foana fa mandritra ny fotoana fohy izany. Indraindray azo hafafy amin'ny sakafo izy io, fa alao antoka fa handray azy ny vavanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » soso-kevitra » Inona no saka-saka?
marlene maria dia hoy izy:
Manana psoriasis aho, afaka manao fitsaboana ozone
Mamaly an'i marlene maria
tsara ary milay ry zoky
elsie robinson dia hoy izy:
Salama, fibromyalgic aho ary tiako ho fantatra raha afaka mandray ny saka-saka aho
Valiny tamin'i Elsi robinson
mavokely dia hoy izy:
zavamaniry manasitrana izy io
Inona no turnip
Holatra sy ny fampiasa azy ireo